Miasa any ivelany: Iza avy ireo firenena manana hafainganam-pandeha ambony indrindra? | Travel tanteraka
Tsy mieritreritra ny anay intsony izahay fiainana tsy misy internet, na ao an-trano na amin'ny findainay. Miantsena amin'ny e-varotra, teleworking, fitetezana tambajotra sosialy, fijerena lalao mivantana na andian-dahatsoratra dia anisan'ny fanao isan'andro izay ataontsika amin'izao fotoana izao ary toa tsy ela akory izay. Fa mba hahafahana manao izany rehetra izany dia ilaina ny manana hafainganam-pandeha tsara amin'ny Internet, Iza avy ireo firenena manana hafainganam-pandeha ambony indrindra eran-tany?
Araka ny fanadihadiana nataon'ny American Ookla izay mandrefy ny hafainganam-pandehan'ny fifandraisana Internet amin'ny alàlan'ny fitsapana SpeedTest, tamin'ny 2021. ny firenena manana aterineto raikitra haingana indrindra dia Monaco, miaraka amin'ny hafainganam-pandeha antonony 260 Mbps, arahin'ireo Aziatika Singapore sy Hong Kong izay manana 252 sy 248 megabytes.
Ao amin'ny ampahany amin'ny Internet, ireo Emirà Arabo Mitambatra izay ambony indrindra amin'ity lisitra ity miaraka amin'ny hafainganam-pandeha 193 megabytes. Ao amin'ny kaontinanta Eoropeana, Norvezy (eo amin'ny toerana fahefatra) no firenena voalohany ao anatin'ireo sisintany ireo izay manana hafainganam-pandeha salan'isa efa ho 167 Mbps.
Ao amin'ny toerana ambany kokoa i Espaina amin'ireo tranga roa ireo. Raha ny hafainganam-pandehan'ny Internet amin'ny fifandraisana raikitra dia eo amin'ny laharana fahatelo ambin'ny folo ny firenentsika miaraka amin'ny salan'isan'ny hafainganam-pandehan'ny fampidinana 194 Mbps. Raha ny Internet finday kosa dia laharana faha-37 i Espaina raha 59 megabytes monja. Raha tianao ho fantatra ny hafainganam-pandehan'ny Internet anananao ao an-tranonao dia avelanay ho anao ny maromaro fitsapana haingana.
Mihabetsaka ny mpampiasa aterineto eran'izao tontolo izao. Nitombo ho 4.665 tapitrisa eo ho eo io isa io tamin'ny taona 2020, araka ny filazan'ny International Telecommunications Union. Raha jerena fa 7.841 tapitrisa ny mponina eran-tany, mihoatra ny antsasaky ny mponina eran-tany (59,4%) no mampiasa aterineto amin'ny fiainany andavanandro.
Mazava izany aterineto Is a dia tsy maintsy eo amin’ny fiainan’ny olona. Ary raha tsy milaza amintsika tsirairay izy ireo, dia nanjary tena ilaina izany ao amin'ny confinement. Na hanao antso an-tsary miaraka amin'ny namantsika izany na hankafy sarimihetsika miaraka amin'ny fianakaviana fotsiny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Miasa any ivelany: iza avy ireo firenena manana hafainganam-pandeha avo indrindra?